Kobo Aura H2O Edition 2, filokana vaovao an'i Kobo hiadiana amin'ny Kindle Amazon | Ireo mpamaky rehetra
Villamandos | | mpamaky, kobo
Kobo dia manohy manandrana manaloka ny Amazon tsitoha sy ny Kindle, izay mandraka androany dia izy no eReader be mpividy indrindra eny an-tsena. Ho an'ity dia manohy miloka amin'ny fitaovana miaraka amina endrika am-pitandremana, hery lehibe ary toetra mampiavaka azy ireo amin'ny boky elektronika sisa eny an-tsena. Ny ohatra farany dia ny Kobo Aura H2O Fanontana 2, kinova nohavaozina sy nohatsaraina Kobo Aura Fanontana 2 izay natombok'ilay orinasa teny an-tsena volana vitsivitsy lasa izay.
Misy manerantany manolotra antsika a mihoatra ny fanandramana tsara hankafizana ny famakiana nomerika, ary manome antsika fanoherana ny rano ihany koa hamela antsika hanitrika azy hatramin'ny roa metatra ny halaliny mandritra ny adiny roa, ary fisehoan-javatra vaovao antsoina hoe ComfortLight PRO izay mampihena ny fipoahan'ny jiro manga mba hahafahantsika mamaky teny amin'ny haizina kokoa. Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, efa nosedrainay tsara ilay fitaovana Kobo vaovao ary io no fanadihadianay an'ity fitaovana ity nantsoina ho lasa iray amin'ireo mpitarika tsena.
1 Famolavolana sy fananganana
2 Endri-javatra sy famaritana
3 Ny zavatra niainantsika rehefa mamaky
4 Fanadihadiana amin'ny horonan-tsary
5 Tombana farany
6 Vidiny sy misy
Famolavolana sy fananganana
Raha jerena voalohany dia tsy io no eReader kanto indrindra na voarafitra tsara amin'ireo rehetra hitantsika eny an-tsena, ary i Amazon no nikarakara ny antsipiriany farany rehetra an'ny Kindle Oasis, ary ity Kobo Aura H20 (2017) ity dia tsy mahaiza mikapoka azy. Ety ivelany dia vita amin'ny plastika mainty eo anoloana izy ary misy fingotra miraikitra, izay tena ilaina amin'ny fotoana marobe, mamela ny fitaovana tsy hiditra amin'ny rantsan-tanantsika. Amin'io fingotra io dia tsy maintsy milaza ihany koa isika fa tsy dia miharihary loatra ary mety handratra ny maso aza, fa ny fampiasana lehibe dia mamela antsika hanadino haingana ireo lafiny ratsy rehetra.
Hita amin'ny loko mainty milamina foana izy io, miaraka amin'ny lokon'ny bokotra herinaratra ihany no misy azy, ary eo aoriany no misy ny manga. Amin'izao fotoana izao dia tsy mbola nanamafy i Kobo raha hamoaka loko bebe kokoa eny an-tsena izy, zavatra iray izay azo antoka fa ankafizin'ny maro amintsika fa tsy miaina amin'ny fahamatoran'ny mainty.
Momba ny fanamboarana dia tsy afaka tsy hanadino ny Fanamarinana IPX68, ary ankoatry ny famelana anay hanitrika azy 2 metatra ambanin'ny rano mandritra ny 60 minitra farafaharatsiny, mamela anao hanavaka ny tenanao amin'ireo boky elektronika marobe hita eny an-tsena izy io. Ity fampiasa ity dia hahafahantsika mitondra ny Kobo Aura H2O Edition 2 mankany amoron-dranomasina, ny pisinina na ny fandroana, tsy misy tahotra ny ho lena. Tsy soso-kevitra izany, fa afaka manandrana ihany koa isika amin'ny famakiana anaty rano, zavatra izay ho sarotra amin'ny olona tokoa.
Ary farany, raha ny famolavolana sy ny famokarana azy dia tsy azontsika jerena ny lanjan'ny fitaovana, izay 207 grama, izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo eReaders mavesatra indrindra eny an-tsena amin'ny isa, na dia eo am-pelatanantsika aza ilay fitaovana, dia dia tsy enta-mavesatra "manelingelina anay" raha ny amin'ny finaritra amin'ny famakiana nomerika.
Endri-javatra sy famaritana
Atorinay anao izao ny endri-javatra lehibe sy famaritana ny Kobo Aura H2O Edition 2 vaovao;
Refy: 129 x 172 x 8.8 mm
Milanja: 207 grama
Efijery 6.8-litera taratasy misy kalitaon'ny fanontana e-ink 265 dpi
Jiro eo aloha: ComfortLigth PRO izay mampihena ny fahazavana amin'ny jiro manga amin'ny famakiana alina mahafinaritra kokoa
Fitoerana anatiny: 8GB ahafahantsika mitahiry ebook mihoatra ny 6.000
Fifandraisana: Wi-Fi 802.11 b / g / n, Micro USB
Batterie: 1.500 XNUMX mAh izay miantoka ny fizakan-tena mandritra ny herinandro maro
Format natsangana: endrika fisie 14 manohana mivantana (EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR)
Fiteny misy: anglisy, frantsay, alemana, espaniola, holandey, italianina, portogey breziliana, portogey, japoney ary tiorka
Personalization: TypeGenius - karazana endritsoratra 11 sy fomba 50+ karazana font
Fikirana endri-tsoratra sy hatevin'ny endriny tsy manam-paharoa
Tsy misy isalasalana, ny iray amin'ireo mampiavaka indrindra an'ity fitaovana Kobo vaovao ity dia ny efijery 6.8-inch, izay ahafahantsika mankafy boky amin'ny endrika nomerika miaraka amin'ny habeny mitovy amin'ny boky amin'ny endrika taratasy nentim-paharazana. Ho fanampin'izany, tokony hanasongadinana ny jiro eo alohan'ny fitaovana ihany koa isika, izay misy ny teknolojia ComfortLight PRO ary mampihena ny fipoahan'ny jiro manga, izay mamela antsika hamaky amin'ny toe-javatra tena maizina nefa tsy mijaly na mandratra antsika mivantana ny masontsika.
Ny zavatra niainantsika rehefa mamaky
Androany dia tsy mahazatra loatra ny mahita boky elektronika misy takelaka lehibe toy izany eny an-tsena, saingy tsy isalasalana fa tombony lehibe ny fahafinaretana mankafy boky nomerika amin'ny efijery 6.8-inch. Tsy dia lehibe toa an'i Kobo Aura izy io, fa ny habeny dia mihoatra ny ampy hananana traikefa tsara lavitra noho izay azontsika atao amin'ny fitaovana misy efijery 6-inch na kely aza.
Ho fanampin'izay, ny famahana ny 256ppi dia manampy betsaka amin'ny fitazonana ny hamafin'ny lahatsoratra sy ny sary, izay ohatra tombony lehibe hankafizanao ireo tantara an-tsary.
Kobo dia tsy nitsitsy raha ny amin'ny fanohanany fanohanana amin'ny endrika samihafa ary amin'ity Aura H20 Edition 2 ity dia afaka mankafy ireo e-book amin'ireto endrika manaraka ireto izahay; EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR. Mazava ho azy, misy ihany koa ny endritsoratra samihafa, izay totalin'ny 11 sy ny habe samihafa mahatratra 50.
Izay rehetra nodinihintsika hatrizay dia misy lanjany lehibe, fa amin'ny fitaovana Kobo vaovao dia tsy maintsy asongadinay ny traikefa tsara atolotry ny efijery E Ink Carta, izay mahatonga ny boky nomerika ho toy ny boky rehetra amin'ny endrika taratasy. Ho fanampin'izany, ny fahafaha-mamaky amin'ny hazavana dia mihoatra ny tsara, noho ireo fahafaha-manao samihafa natolotry ny fitaovana azy manokana.
Miresaka momba ny Endri-javatra ComfortLight PRO izay mampihena ny fipoahan'ny jiro manga ary voafehy izany arakaraka ny hazavana eo amin'ny tontolo iainana ka amin'ny fotoana rehetra dia ahazoana aina tokoa ny mankafy mamaky. Raha nohazavaina tamin'ny fomba tsotra dia afaka milaza isika fa raha mamaky ety ivelany dia hahery kokoa ny jiro ary raha mamaky ao anaty haizina isika dia hihena ny haben'ny hazavana mba tsy ho reraka ny masontsika.
Tato ho ato dia nanam-bintana isika nanandrana eReaders maro, marika samy hafa, ary misy endri-javatra isan-karazany, nefa tsy isalasalana fa ity Kobo Aura H2O Edition 2 ity dia iray amin'ireo traikefa tsara indrindra natolotray momba ny famakiana, laharana na dia mialoha ny Kindle Amazon aza. Mazava ho azy, raha manome lanja erak'izao tontolo izao ny fitaovana isika, ka apetrakao amin'ny endriny ny volavolany, dia mety hihena kely izany, fa iza kosa no miraharaha ny famolavolana azy raha toa ka miabo be ilay traikefa nahafinaritra azy tamin'ny famakiana nomerika.
Fanadihadiana amin'ny horonan-tsary
Etsy ambany izahay dia mampiseho aminao ny famakafakana an'ity Kobo Aura H2O Edition 2017 ity amin'ny horonan-tsary;
Ity Kobo Aura H2O Edition vaovao ity dia sarotra ny mamela ny olona tsy hiraharaha afa-tsy ny mitazona eo anelanelan'ny tanana. Ary io endriny io dia efa nahasarika ny sain'ny olona ary koa ireo fitaovana anaovana azy io dia manolotra antsika fikitika izay mety tsy ho voamariky ny olona.
Ankoatr'izay, ity fitaovana vaovao ity dia manambatra fiasa mahaliana maro, izay mahatonga an'ity Kobo Aura H2O 2017 ity ho boky elektronika tena mahaliana. Miresaka momba ny efijery goavambe natolony anay izahay, ny mety hamandoana azy, zavatra mety indrindra amin'ny vanin-taona fahavaratra, ary ny hafainganan'ny hafaingananay amin'ny alàlan'ny fampifandraisan'ny mpampiasa sy amin'ireo boky nomerika samihafa ankafizinay .
Raha toa ka tany am-pianarana izy ireo dia nangataka ahy hanome naoty farany ho an'ity Kobo Aura H2O Fanontana vaovao ity dia ho avo dia avo izany, eo anilan'ny miavaka, na dia hahatratra an'io aza dia mila manatsara amin'ny lafiny sasany zavatra izay azo antoka fa ho tratran'i Kobo miaraka amin'ireo fitaovany manaraka. Ity fitaovana vaovao ity dia mpifaninana matotra amin'ny Amazon's Kindle, ary boky vitsivitsy amin'ny e-book no manakaiky ny fanatanterahana naoty A manerantany.
Ity Kobo Aura H2O Edition 2 vaovao ity dia efa amidy manerantany, amin'ny alàlan'ny tranokala Kobo ofisialy sy amin'ireo magazay teknolojia manan-danja indrindra. Tsy mihena marina ny vidiny, mijery 179,99 euro, saingy tsy tokony hohadinointsika fa miatrika boky elektronika isika miaraka amin'ireo toetra mampiavaka azy indrindra.
Azonao atao ny mividy ny Kobo Aura H2O Edition 2 vaovao HERE ary koa amin'ny alàlan'ny fivarotana ara-batana an'ny FNAC, fnac.es y kobo.com
Ahoana ny hevitrao momba an'ity Kobo Aura H2O Edition 2 vaovao ity?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity fidirana ity, ao amin'ny forum-ntsika na amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo tambajotra sosialy misy anay ary aiza no hazoto handrenesana ny hevitray momba izany.
Kobo Aura H2O Fanontana 2
Famerenana ny: Villamandos
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Kobo Aura H2O Edition 2, filokana vaovao an'i Kobo hiadiana amin'ny Kindle Amazon
Misaotra tamin'ny famerenana Villamandos. Ny marina dia liana te hahafantatra momba ny Kobo foana aho. Manintona ahy ny efijery lehibe kokoa amin'ity modely ity sy ilay Aura One. Heveriko ihany koa fa ny jiro "alina" dia fahombiazana lehibe izay ilain'i Amazon ny fakana tahaka.
Mazava ho azy, ny famolavolana ny Kindle Oasis dia tia ahy amin'ny fitiavana. Heveriko fa mety amin'ny famakiana mandry (toy ny fanaoko matetika) ary maivana ihany koa.
Na izany na tsy izany, mifikitra amin'ny Kindle Paperwhite andiany faharoa aho mandra-pahitako ny tena fanatsarana. Ny fanatsarana dia, ohatra, amin'ny fampidirana famandrihana masoandro na fanatsarana ny efijery. Voamarikao ve ny fisehon'ny maizina EInk mampiseho tsy misy hazavana natsangana? mbola mila manatsara ny teknolojia be izy ... tsy haiko raha hainy.
Fanontaniana iray… ahoana ny amin'ny rakibolana Kobo? Hitako amin'ny horonantsary milaza aminao fa tsy manana napetraka ianao. Tao amin'ny fandoroako ny diksionera espaniola sy anglisy ary ny safidy fandikana dia nampidirina. Bika matoanteny
Javi tena tsara!
Ny endrik'ity Kobo Aura H2O Edition 2017 ity dia tsy ny mampiavaka azy tsara indrindra, fa raha ny marina dia manome an'ity efijery ity na jiro amin'ny alina, iza no maniry hanana endrika tsara kokoa?
Mikasika ny fanatsarana, indrisy fa niandry elaela tamin'ny famoahana masoandro isika, fa amin'ity fitaovana ity dia mino aho fa misy fanatsarana lehibe eo amin'ny efijery indrindra ary amin'ny hazavana omeny antsika hamaky amin'ny toe-javatra maizina tanteraka.
Miombon-kevitra tanteraka amin'izay lazainao momba ny efijery EInk aho. Raha tsy ny jiro natsangana tao amin'ny efijery dia ho sarotra ny mankafy tanteraka ny famakiana nomerika.
Raha ny marina dia tsy afaka mamaly ny fanontaniana momba ny rakibolana aho, satria tsy nametraka iray aho ary tsy zavatra matetika ampiasako matetika loatra. Inona koa, tsy fahita firy fa ny eReader dia mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi ary ny zavatra ataoko matetika dia ny misintona ny findaiko hijerena zavatra.
Andres Majorcan dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny famakafakana.
Manana ny Kobo Aura One aho ary ity H2O ity dia mitovy ihany nefa iray hakiho kely. Raha izany dia manome soso-kevitra 100 × 100 aho, faly amin'ny ahy izany. Ny ComfortLight dia mirentirenty ary, raha tsy liana ianao amin'ny fotoana iray, dia azonao atao ny mamono sy manitsy ny jiro araka ny itiavanao azy ary mamono azy io koa mba hitsimbinana bateria. Ny hany zavatra nanatsarana an'ity H2O ity ho an'ny Aura One dia ny hafainganam-pandehan'ny pejy hitako tamin'ny horonantsary, ny Aura One dia tsy dia haingana fa tsy ratsy koa.
Rehefa nanapa-kevitra ny hividy mpamaky e-farany ihany aho tamin'ny farany dia nisalasala teo anelanelan'ny H2O teo aloha na ny Aura One ary mieritreritra aho fa ilaina ny mandoa vola bebe kokoa raha mila efijery lehibe toa ilay 7,8 ″ Iray ianao. Ankoatr'izay dia azoko ny amidy amidy € 201 tao amin'io magazay io fa tsy adala izy ireo.
Valiny tamin'i Andrés mallorquín
Misaotra anao Andrés nandray anjara!
Marina fa ny fahasamihafana misy eo amin'ny H2O tany am-boalohany sy ity dia tsy dia be loatra, fa ohatra ny iray izay miharihary ny kaontinao momba ny pejy, ary nampidirina koa ny fanoherana ny rano, izay mahaliana.
Tahaka anao, manolotra Kobo aho anio ary mieritreritra foana aho fa noho ny antony maro samihafa.
sebas dia hoy izy:
Tena tsara ary misaotra anao tamin'ity fitsapana kalitao ity!
Toa hitako fa ity maodely ity no ho mahomby indrindra satria manana ny mampiavaka azy (afa-tsy ny haben'ny efijery) amin'ny Aura ONE sy amin'ny € 50 latsaka. Manana ny Aura ONE aho ary indraindray dia mivoaka somary lehibe rehefa tsy ao an-trano aho.
Fanehoan-kevitra sy valiny vitsivitsy:
- Diksionera: misy rakibolana sy mpandika teny miisa 20 eo ho eo, sintomy fotsiny izy ireo, tena tsotra.
- Mahagaga aho fa ny bilaogy matotra toy izany dia afaka mampitaha ny € 2 Aura H179O amin'ny € 289 Kindle Oasis. Toy ny mampitaha ny fahitalavitra Grundig € 500 amin'ny Samsung 800, na ny seza 15000 miaraka amin'ny Audi 24000. Tsy azo ampitahaina izy ireo !!! Raha te hanao fampitahana ara-drariny ianao dia mila mandeha amin'ny Kindle Voyage, ary any, tsy dia be loatra ny milaza ...
- Ny tsy ampy ahy indrindra eto dia misy hevitra vitsivitsy momba ny katalaogy, izay amin'ny farany no zava-dehibe indrindra amiko izay novakiako be dia be ary novakiako betsaka tamin'ny teny anglisy. Io no antony nahatonga ahy hiova bq ka hatrany Kobo, ary toa tsy misy manana katalaogy midadasika kokoa noho ny kobo (mamoaka mihoatra ny 5 tapitrisa izy ireo, ary mbola tsy nahita tarehimarika ambony toa an'i Amazon mihitsy aho). Raha afaka manome fampahalalana vitsivitsy momba an'io sy ny traikefa fiantsenana ianao, dia tsara izany.
- Mikasika ny fanatsarana raha oharina amin'ny maodely teo aloha, ambonin'izany rehetra izany nylightlight PRO (hazavana voajanahary), satria ilay teo aloha dia efa tsy tantera-drano.
Mamaly an'i Sebas
Salama. Mieritreritra ny hividy Kobo aho satria tapaka ny Bq.
Fa te hahafantatra zavatra tena lehibe amiko aho, mamela anao handalo boky efa navotsotra ve ianao? Tsy te-hanana risika amin'ny fividianana azy aho raha mamela anao hividy boky amin'ny fampiharana azy fotsiny. MISAOTRA
Harry Potter dia feno 20 taona ary averinay ny curiosities 20 momba ny mpamosavy fanta-daza tamin'ny fotoana rehetra
Ireo mpamaky ebook tsara indrindra amin'ny endrika epub